Deploy, Ree, ma soro ndị na-ebupute mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 23, 2012 Mọnde, Jenụwarị 1, 2018 Douglas Karr
Otu n'ime ihe dị jụụ banyere ịbụ ụlọ ọrụ ịzụ ahịa na ịgba ọsọ Martech Zone bụ na anyị ga-eji ngwa nke ndị ahịa anyị were saịtị anyị na saịtị nke ndị ahịa anyị. Mpempe akwụkwọ abụrụla ndị enyi kemgbe ha bidoro… n'ezie tupu ha amalite. Enwere m obi ụtọ nke ịrụ ọrụ na otu n'ime ndị guzobere afọ iri gara aga ma nwee mmasị n'ịhụ ya ka ọ na-awụlikwa ụgbọ mmiri site na mgbasa ozi ọdịnala na mmalite Mpempe akwụkwọ.
Formstack etolitela ugbu a karịrị ndị ọrụ 100,000! Obi dịkwa anyị ezigbo ụtọ ịnabata ha dị ka ndị na-akwado Martech.
E nwere ndị ọzọ na-ewu ụlọ na ebe ahụ ma nwekwaa ndị na-ewu ụdị dị iche iche. Mpempe akwụkwọ ebipụtala akụkụ buru ibu nke ahịa ahụ n'ihi na ha bụ n'ezie ndị na-ere ahịa na ndị na-amaghị maka ihe ọdịnala. Otu n'ime obere igodo mara Mpempe akwụkwọ Ihe ịga nke ọma, n'agbanyeghị, bụ na ha arụla ọrụ dị egwu n'ịrụpụta njikọta ngwaahịa na nyiwe ndị ọzọ. Ndepụta dị ịtụnanya… na ugbu a Mpempe akwụkwọ ka beta weputara ikpo okwu ozo a na akpo Ẹkedori akwa.
Mpempe akwụkwọ Launch ọhụrụ nke Formstack bụ ikpo okwu jikọtara ọnụ nke ụdị ntanetị, ibe weebụ, ụlọ ahịa e-commerce, yana ngwa ahịa azụmaahịa email, etinyere ịme obere azụmahịa gị na ọkwa ọzọ. Ọ bụ oghere nke ngwa weebụ dị mfe nke ga-eme ka ịme azụmahịa gị dịkwuo mfe. Nke a bụ nnukwu ọrụ onye ọrụ ahụ Mpempe akwụkwọ mepụtara iji kọwaa Launch Pad:
Oliver nwere ụlọ ahịa na-azụ ihe n'ógbè ma bụrụ onye na-anụ ọkụ n'obi Mpempe akwụkwọ onye ọrụ na-achọ ịgbasa obere azụmaahịa ya 'n'ịntanetị. Soro akụkọ banyere otu o si jiri mee ihe Mpempe akwụkwọ 'Mwepụta mpempe akwụkwọ iji were azụmahịa ya na ọkwa ọzọ.
Debe - Oliver jiri Peeji ahụ mepụta ngwa ngwa webata ebe ndị ọbịa nwere ike ịnweta ozi gbasara azụmaahịa ya yana njikọ ya na ụlọ ahịa ya. Oliver nwere ike ịhazi ibe ya ka ọ daba na agba na mmetụta nke akara ya.
ere - Site na peeji Oliver, ndị ahịa nwere ike ịnweta onyinye ngwaahịa ya niile site na ngwa ahịa. N'iji ngwá ọrụ a, Oliver debere ibe nke ọ bụla maka ngwaahịa ya, na-enye ndị ọrụ ohere ịchọgharị ma tinye iwu na snap.
Gwa - Mgbe o chịkọtara adreesị email nke ndị ahịa, Oliver chọrọ ka ha mara banyere ahịa na ihe ga-eme n’ọdịnihu. O jiri mpempe mpempe akwụkwọ iji mepụta mkpọsa email ahaziri iche nke gosipụtara ihe ndị a, na-agba ndị ọhụụ ọhụrụ ya ume ịlaghachi na ụlọ ahịa ahụ, na ụlọ ahịa ma ọ bụ na ntanetị.
na Mpempe akwụkwọ 'Launch Pad, ị nwere ike ịmalite-ịmalite (ma ọ bụ welie) mbọ azụmaahịa gị n'otu ikpo okwu. Ọ dị mfe ijikwa, na-ewe obere oge iji bido, nke kachasị, ọ na-enye gị ohere ịlaghachi n’ihe ị chọrọ ime. Malite a free ikpe nke Launch Kedo akwa taa… ndị ọkachamara na ndenye aha bụ naanị $ 29 kwa ọnwa!
Tags: weghara datanakọta datannweta datampempe akwụkwọjikota ecommerceigba egbe na mpe mpe akwa